8 Ihe onyonyo maka ire ahia gi na Instagram | Martech Zone
Oge obula, m na-enweta ezigbo ndeputa ma o bu obere nkenke ndụmọdụ m ga-acho ikuko. Kama dị nnọọ tweeting ya, M na-emeghe Depositphotos® ngwa mkpanaka ma chọta onyonyo mara mma. M na-akuku ya site na iji iPhone m wee mepee ya na N'ime Ngwa. N'ime oge 10, enwere m ọmarịcha foto nke nwere ike gbaa ụfọdụ n'ime ume ụlọ ọrụ Instagram nke ụlọ ọrụ anyị. Lee otu ihe atụ:
Kedu ihe jikọrọ ya na imepụta ahịa maka ụlọ ọrụ m? Achọpụtala m n'ime ọtụtụ afọ na ohere kachasị na ndị ahịa sitere na netwọkụ anyị, ọ bụghị site na ịkwalite ihe nzuzu na ya.
Instagram bụ netwọkụ mmekọrịta na-ahụ anya nke na-enye ụzọ dị mma iji mepee ndụ m na ịkekọrịta ya n'ịntanetị. M na-etinye nile di iche iche nke ihe oyiyi elu - si anyị ọrụ ka anyị na ndị ahịa, ka nkịta m… na ee… ụfọdụ na-akpali akpali ruturu na n'etiti. Anyị enweghị nnukwu ndị na-eso ụzọ, mana anyị nwere nnukwu ndị enyi ndị masịrị ma kesaa ihe anyị na-ebipụta.
naHootsuite, anyị nwekwara ike ịtọọ ihe ndị anyị dere na Instagram ka ndị na-ege anyị ntị! Hazi usoro mmelite nke Instagram enweelarị ọfụma na ịhazi nkwalite maka ndị ahịa anyị.
Etu ị ga-esi zụọ ahịa gị na Instagram
Osisi tinye ọnụ ihe ọmụma a dị mkpirikpi iji nyere gị aka iche echiche maka ihe oyiyi na vidiyo ị nwere ike ịkekọrịta iji mụbaa maka akara gị ma wulite mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị. Ha na-enye echiche onyonyo asatọ ị nwere ike iji uru azụmaahịa gị na Instagram:
Gosiputa ngwa ahia gi (ma obu ndi ahia gi!)
Gosi otu esi eme ahia gi ma obu nye oru gi.
Gosi ihe ngwa ahia gi ma obu oru gi nwere ike iru
Gosi ụlọ ọrụ gị na ndị ọrụ gị
Kekọrịta ihe omume ị na-aga
Share quotes na mmụọ nsọ
Jiri asọmpi iji nweta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ
N'ezie, n'okporo ụzọ ị nwere ike ịchụpụ ụfọdụ mgbanwe na-eji Bọtịnụ Buy nke Instagram!
Tags: echiche echichen'ike mmụọ nsọinstagramahịa nke instagramvidiyo instagram